Okuhle kakhulu kwe-off-piste okwehla nezibuko zakho zeqhwa! - ULLER
IFreeride yaziwa njengemodi ye ukushibilika eqhweni lapho wenza ukwehla kwe-off-piste ngokuphelele, eqhweni eliyintombi ngokuphelele, ukugwema wonke amadwala nezithiyo eziza kithi. Njengamanje kunemincintiswano ye-freeride snowboard emizileni ehlangabezana nezimo ezikahle, yize iqiniso ukuthi abathandi beqiniso be-freeride ngokungangabazeki bathanda iseshini enhle yeqhwa lempuphu ngokugxuma okuthile okunamatshe.
Imvamisa, abanye abantu bahlobanisa i-freeride neminye imikhakha efana ne-carcarve noma i-snowboard ngokweqile. Kepha iqiniso ukuthi izikhathi eziningi kumane kuyindaba yemininingwane emincane. Isibonelo, amabhodi eqhwa asetshenziswe kuleli cala kufanele asebenziseke kakhulu ngoba lapho kuphuma i-freeride kuyadingeka ukuthi ibhodi linikeze isimilo esihle kakhulu eqhweni eliyimpuphu, eqhweni eliqinile nalapho lizijwayeza ukusuka emugqeni onamadwala esiwabamba ngawo yethu izibuko zeqhwa.
Ngoba anezinto eziningi eziguquguqukayo futhi eziguquguqukayo, amabhodi ama-freeride shape athatha cishe ingxenye yesabelo sonke semakethe, njengoba eqinisekisa ukusebenza okuhle kuzo zonke izimo, angamabhodi ezindawo zonke: noma ngabe awekho emithambekeni, eqhweni noma ipayipi uhhafu, futhi nasemithambekeni yendawo yakho yokushibilika eqhweni.
Sikhuluma ngamabhodi wokuqondisa, okungukuthi, aklanyelwe ukuthi abekwe ohlangothini olulodwa kuphela: ngaphambili, phambili. I-snowboard inesimo esiqondisayo lapho ithiphu nomsila kungalingani. Umsila unciphile, mfushane, futhi ugobile ngaphansi kunangaphambili kwebhodi. Ngalesi sizathu, emabhodini e-freeride izibopho zibekwa emuva kancane ukuze isisindo somgibeli silayishwe ngemuva kwebhodi futhi ngaleyo ndlela sinxephezele le asymmetry. Noma ngayo yonke into, ungazijayeza ukuhamba kwe-fakie ngalolu hlobo lwebhodi, yize kungenzelwanga yona ngokukhethekile.
Amabhodi e-Freeride abonakala ngokuqina, ukuba made nokuba mncane kunamabhodi we-freestyle. Ngaphandle kwalokhu, bane-flex ethambile kakhulu futhi bayakwazi ukuguquguquka, okulusizo olukhulu kubaqalayo. Futhi ukuthi ama-freerides angamabhodi eqhwa ahlukahlukene kakhulu futhi enza izinto eziningi ongawathola, ngoba asebenza cishe kuzo zonke izimo ongazithola ezingeni elihle.
Ngendlela, ngamabhodi "wazo zonke izintaba" ungagqoka amabhuzu "athambile" noma "angene" nezibopho. Ukwehlukaniswa phakathi kwalezi zibopho kukhulu impela (phakathi kwamasentimitha angama-50 kuye kwangama-55) futhi i-engeli yabo iyahluka ngokuya ngomgibeli ogibele ibhodi, imvamisa, phakathi kuka-0 no-15 degrees ngemuva naphakathi kuka-15 no-25 ngaphambili. Kodwa-ke, abanye abagibeli babheja endaweni "yedada". Ama-freeriders amsulwa kakhulu abopha izibopho ngokuya emuva kancane ukuze akwazi ukuntanta kangcono ... Njalo egqoke amabhangqa awo amahle kakhulu izibuko zeqhwa.
Ukuthuthukiswa kwe ukushibilika eqhweni Kususelwa kweminye imidlalo yezilayidi efana ne- skateboarding noma ukuntweza emanzini. Ngo-1965, unjiniyela uSherman Poppen wakhela "ibhodi" lakhe lokuqala leqhwa lendodakazi yakhe eMuskegon, eMichigan. Kwakuyibhodi lamapulangwe elalingabambeki izinyawo futhi linentambo ngaphambili elalisiza ekulinganiseni. Inkampani yaseBrunswik yanquma ukuthuthukisa nokuthengisa lo mqondo omusha owawuphumelela kakhulu ngawo-60s nango-70.
Futhi ngalesi sikhathi, u-surfer othanda ukushushuluza uDimitrije Milovich waklama ibhodi elilingana namasikisi kodwa libanzi kakhulu futhi wavunyelwa "ukuntweza" eqhweni lempuphu, elaziwa njengeWinterstick.
Namuhla kunezigidi zabantu abenza lo mdlalo lapho sekuyindlela yokuphila yabaningi nomdlalo lapho imfashini egqoke izingubo ze-snowboard ikhona kakhulu.
Kufike nini eSpain?
Ngaphandle kokuthi uSherman Poppen wasungula ukushibilika eqhweni e-United States ngeminyaka yama-60s futhi yaduma ngeminyaka yama-80, ayifikanga eSpain kwaze kwaba sekuqaleni kweminyaka yama-90.
Yiziphi izindlela ze-snowboarding?
Okudume kakhulu yiFreestyle, iFreeride, iPallel Slalom, iBhodiercross nentaba noma ukushibilika eqhweni ezintabeni. Ngaphakathi kweFreestyle sithola okulandelayo:
I-Slopestyle: ukweqa, izitimela namadilowa. Kuzoba yisiyalo sama-Olimpiki kusuka kuma-Olimpiki asebusika ka-2014.
Ngingayithola kuphi i-snowboard eSpain?
Thatha ithuba uphunyuke no izibuko zeqhwa eziteshini ezihamba phambili: iBaqueira-Beret (kokuthunyelwe kwami ​​kwangaphambilini uzothola lonke ulwazi), i-Astún, i-Candanchú, i-Formigal, i-Cerler ne-Sierra Nevada.
Futhi jabulela ama-Snowpark abasethe. Zisebenza kakhulu kakhulu ngabakhi abakhulu. Ngokunambitha kwethu, okuhle kakhulu lokho kweFormigal. Isimo phakathi kwabagibeli naso asinakuhlulwa.
Ngabe ujabulile ngalolu lwazi mayelana nokushibilika eqhweni?
Nawa amavidiyo amnandi azokushiya uconse amathe usuku lonke ... Ungaphuthelwa!
Khumbula ukuphatha njalo yonke imishini yakho yezemidlalo kufaka phakathi eyakho izibuko zeqhwa,kanye nokulungiselela okuningi ngokomzimba nangokwengqondo, kepha ngaphezu kwakho konke ... ngifuna ukukudlulisa!
Umqansa owesabekayo waseMonte Zocolan 9,8 amakhilomitha lapho ngisho nabagibeli bamabhayisikili abangochwepheshe bezwa imilenze yabo isha. Le ntaba ingenye yezintaba eziyishumi ezinzima kakhulu ezidlula kuleyo fomu
Wake wezwa ngokugula okuphezulu ngaphambili? Yigama elijwayelekile elithola iqoqo lezimpawu esihlangabezana nazo lapho siqala ukuqeqeshwa ngaphezu kwamamitha ayi-2400 ukuphakama. Okuhle,